Khin Maung Chin: ချစ်မိသွားပါသဖြင့် ၉ (ဇာတ်သိမ်း)
25 May 2011 11:51 AM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
'' အမလေး ခေါင်းတွေထိုးလိုက်တာအိရယ်..အား''
ဟော သောက်တာတောင်တစ်ခွက်ထဲမဟုတ်...သုံးလေးခွက်ဆက်တိုက် ညည်းကိုမနေ့ကအိမ်ရောက်လာအောင်တောင်မနည်းခေါ်လာရတယ်သိလား ယမင်းရဲ့ ''
'' ဒါပေမယ့်ညည်းကတော့သောက်လိုက်တယ်မလား? '' ဟုပြောရင်း
''ကျေးဇူးအိရယ်.. လူတွေဒီလောက်အဝင်ဆိုးတာကြီးကိုဘာလို့မက်မက်မောမော သောက်ကြတာလဲမသိဘူးနော်''
''ညည်းကောဘာလို့သောက်တာလဲ ယမင်း ? ''
''အေးးညည်းမသိရင်ငါပြောပြမယ်. မနေ့ကငါနဲ့သီဟတို့ Close Dance လုပ်နေတာညည်းမြင်ရတော့အူတိုပြီးသောက်လိုက်တာပဲ.. ငြင်းဖို့တော့မကြိုးစားပါနဲ့ယမင်း..ဟုတ်တယ်မလား? ''
''အဓိပ္ပါယ်ရှိတာပြောနေတာလား..အဓိပ္ပါယ်မရှိတာကိုပဲငါပြောနေတာလားဆိုတာ နင်သိချင်လားယမင်း..တကယ်တော့ခုငါပြောနေတာတွေက နင်ပြောချင်တာဟုတ်မဟုတ်ငါမသိပေမယ့် နင့်နှလုံးသားကပြောချင်နေတဲ့စကားတွေမှန်းငါသိပါတယ်ယမင်းရယ်.''
သိစိတ်ထဲကဝန်မခံရဲကြပေမယ့် မိမိချစ်သူအကြောင်းဆိုလျှင် ကဂနဏသိလိုကြသည်မှာ လူသားတို့ရဲ့ဗီဇပဲမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ...
''ငါကလည်းပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့.. ကိုမောင်မောင်စိုးကရုပ်ချောတယ်၊ဥစ္စာပေါတယ်၊ ပညာတတ်အသိုင်းအဝိုင်းထဲကပေါက်လာတဲ့ပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်၊စီးပွါးရေးခိုင်မာတယ်.. အဲတာတွေပြောလိုက်တာပေါ့..မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်အလိုချင်ဆုံးအချက်တွေ
'' ဒါမပြောလို့ငါကဘာပြောရမှာလဲယမင်းရဲ့.. တိုက်ဂါးကဘာပြောလဲသိလား.ငါကကိုမောင်မောင်စိုးကရုပ်ချောတယ်ပြောတော့
ငါကကိုမောင်မောင်စိုးကပညာတတ်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကမွေးဖွားလာတဲ့ခေတ်ပညာတတ်တစ်ယောက်လို့ ပြောတော့တိုက်ဂါးကငါ့သူငယ်ချင်းသီဟလည်း အင်ဂျင်နီယာကျောင်းဆင်းပညာတတ်တစ်ယောက်ပါတဲ့.. နောက်ဆုံးငါလည်းသူနဲ့ပြိုင်မပြောနိုင်တော့တာနဲ့ ကိုမောင်မောင်စိုးကယမင်းကိုအရမ်းချစ်တာပဲ..လို့ပြောလိုက်ရောတိုက်ဂါးကလည်း ငါ့သူငယ်ချင်းသီဟလည်း
ယမင်းကိုဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်းပြီးချစ်နေတဲ့သူပါဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ သီဟလည်းသူတပါးနဲ့လက်ထပ်တော့မယ့်သူကိုချစ်ခဲ့မိတာအပြစ်ကြီးတစ်ခုလို့ထင်သွားလားမသိဘူး.. တိုက်ဂါးကိုတောင်မစောင့်ပဲချာကနဲလှည့်ထွက်သွားခဲ့တယ်လေ. ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သီဟကနင့်ကိုချစ်နေတာမသိမသာဝန်ခံလိုက်တယ်လို့ငါမှတ်ယူတယ်ယမင်း.. ပြီးတော့နင်...နင်လည်းငါနဲ့သူတွဲကလိုက်တာကိုမြင်လိုက်မိလို့မခံစားနိုင်ပဲ အရက်ကိုအမူးသောက်လိုက်တဲ့သူဆိုတော့ နင့်ကိုနင်လှည့်စားပါယမင်း.. အချိန်မလွန်ခင်နောင်တရသင့်တယ်လို့ငါပြောချင်တယ်ယမင်း''
'' တသက်မှာတစ်ခါသာချစ်ခွင့်ရတဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အချစ်အတွက် နင့်ကိုနင်ဆက်ပြီးလှည့်စားလိမ်ညာနေဦးမှာလား၊နင့်နှလုံးသားကနာနာကျင်ကျင်တောင်းဆိုနေတာကို ဥပေက္ခာပြုပြီး ကိုမောင်မောင်စိုးကိုလက်ထပ်မလားဆိုတာရွေးချယ်ဖို့နောက်မကျသေးဘူးလို့ ငါပြောပါရစေယမင်း''
လို့ပြောပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်.. ထမင်းစားခန်းထဲမှာတော့ယမင်းတစ်ယောက်အတွေးတွေနဲ့ကျန်နေခဲ့တာပေါ့..။ တချိန်ကကော်ဖီဆိုင်မှာ(ယမင်းကတော့နောက်နေတယ်ပဲထင်နေမိခဲ့တာလေ.)ကိုသီဟယမင်းကို
Propose လုပ်ခဲ့တာတွေ၊စိန်နားကပ်သွားဝယ်တုန်းက ကြည့်မှန်ကိုပြပြီး အဲဒီထဲက
ရွှေတယောနာရီလေးရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုသွားပြီး အဲဒီနာရီလေးကိုဝယ်..နောက်တော့ဘူးလှလှလေးနဲ့ထုပ်ပြီးကိုသီဟကိုလက်ဆောင် ပေးမလို့ရည်ရွယ်လိုက်မိတာပေါ့..လက်ဆောင်နဲ့အတူချစ်အဖြေလည်းပါတာပေါ့လေ.. ဟုတ်တယ်လေ...သူ့ကိုဒီလောက်ချစ်နေတဲ့ကိုသီဟကို သူကလည်းချစ်နေပြီးမှဘာလို့ဝေးနေရတော့မလဲပေါ့.... စေ့စပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံး Cancel လုပ်ပြီးကိုသီဟနဲ့လက်ထပ်ဖို့အထိပါယမင်းအင်အားတွေရခဲ့တာပါ..
SMS ပို့ထားတာပေါ့.. ကိုသီဟလာရင်သူနဲ့တွေ့ဖို့အချိန်နည်းနည်းပေးဖို့ပေါ့လေ..
( မှတ်ချက်...။ ။...ဤအချိန်တွင်ယမင်းအိတို့အိမ်မှာမနေတော့ပါ.. နယ်မှမိခင်ဖြစ်သူလိုက်လာပြီးသားအမိနှစ်ယောက်မာမီ့အစ်ကိုယမင်းဘကြီးအိမ်တွင်နေထိုင်ကြသည်ပေါ့..။)
''မမကြီး ယမင်းပို့ထားတဲ့ Massage ကိုသီဟကိုမပေးဖြစ်ဘူးလား ? ''
'' ဟုတ်ကဲ့မမကြီး..အိမ်ကတော့ယမင်းအိမ်လိုပါပဲ.တနေ့နေ့တော့ယမင်းလာခဲ့မှာပါ ''
'' ကိုသီဟ ''
'' ယမင်း.. ဘာကိစ္စရှိလို့လဲယမင်း? ''
''ယမင်းပို့ထားတဲ့ Massage မရလို့လားကိုသီဟ? ယမင်းမှာတော့ရှာလိုက်ရတာ... နေ့မအားညမအားအလုပ်တွေချည်းပဲဖိလုပ်နေတာအဲဒီလောက်ပိုက်ဆံတွေဘာလုပ်ဖို့လဲကိုသီဟရယ်.''
''ယမင်းပို့တဲ့Massage ရပါတယ်..အလုပ်ဖိလုပ်တယ်ဆိုတာကပိုက်ဆံများများလိုချင်လို့ဖိရှာနေတာပါ.. ဒါမှအချစ်ကိုရမှာလေ.''
''ဘယ်သူမှမပြောပါဘူး..ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတွေကပြောနေ၊သင်ပေးနေတာတွေပါယမင်း.. ပထမနွယ့်ကိုလည်းပိုက်ဆံမပြည့်စုံခဲ့လို့ကိုယ်ဆုံးရှုံးရပြီးပြီ..ယမင်းကိုပဲကြည့်ပေါ့.. ကိုမောင်မောင်စိုးဆီမှာငွေကြေးပြည့်စုံတော့ ယမင်းမာမီက (သမီးမောင်မောင်စိုးမှာခိုင်မာတဲ့အနာဂတ်ရှိတယ်..ဒီတော့သမီးမောင်မောင်စိုးကိုလက်ထပ်လိုက်ပါ) ဆိုတာနဲ့သမီးဖြစ်တဲ့သူကလည်း (အိုခေမာမီ)ဆိုပြီး ခေါင်းညိမ့်သဘောတူခဲ့တာပဲလေ..ဒါတွေဟာငွေကြေးကြောင့်မဟုတ်ရင်ဘာကြောင့်လဲယမင်း? ''
''ကောင်းပါပြီ..ကိုသီဟက ကျမကိုအဲလိုမြင်နေတော့လဲအဲလိုပဲမှတ်ထားလိုက်ပေါ့ရှင် .. ရော့ဒီမှာကိုသီဟအတွက်ရည်စူးဝယ်လာခဲ့တဲ့ယမင်းရဲ့လက်ဆောင်. ကိုသီဟဘဝတစ်လျှောက်လုံးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ယမင်းဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်.ဘိုင်.''
ဆိုပြီးလှည့်ထွက်သွားခဲ့တော့တာပေါ့ဗျာ.... စစ်မှန်တဲ့အချစ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်လာပြီးနောက်အချစ်အတွက်အရာရာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်မယ် ဆိုပြီးစိတ်ပိုင်းဖြတ်ကာ မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ကျနော့်ဆီလိုက်လာတဲ့ယမင်းက ကျနော့်ဘဝထဲကအပြီးအပိုင်ထွက်သွားလိမ့်ခဲ့မယ်ဆိုတာကြိုသိရင် ကျနော်ပြောလိုက်မိတဲ့ခါးသီးတဲ့စကားတွေကို ကျနော်
မပြောပဲမြိုသိပ်ထားမိမှာပါ..ခုတော့ရင်ထဲကခံစားချက်တွေက မကျေနပ်ချက်တွေကြောင့်ပေါက်ကွဲပွင့်ထွက်လိုက်မိတော့လည်း.. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အသည်းနင့်အောင်ချစ်နေကြတဲ့အမှန်တရားကိုတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်မဖွင့်ဟမိခင်လေးမှာပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အဝေးဆုံးကိုရောက်သွားခဲ့ပါပြီဗျာ.. နောင်ဘဝဆိုတာရှိသေးရင်တော့ခုလိုမျိုးကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ကွေကွင်းရခြင်းဆိုတဲ့ ဒုက္ခမျိုးကိုသားစဉ်မြေးဆက်မခံစားရပဲ ချစ်သူနဲ့သာပေါင်းဖက်ရပါလို၏လို့ရင်မှာတိုးတိုးတိုင်တည်ရင်းးးး
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မလှမပလေးပြီးသွားခဲ့ပါပြီ..။ အမှန်ကဇာတ်လမ်းအစစ်ကလှပပေမယ့်ရေးသူကျနော်ညံ့ဖြင်းတော့လည်း နဂိုလှပတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးက မလှမပဖြစ်ခဲ့ရတာပါ.. အဲဒီအတွက်အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်.. စိတ်ရှည်စွာနဲ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကျနော့်ရဲ့ မဖြစ်စလောက်ဘလော့လေးကို လာလာပြီးအချိန်ပေးဝင်လည်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းအဝဝ ရရှိနိုင်ပါစေလို့ ကျနော်ချင်းလေးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ.
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ဇာတ်လမ်းရှည်4ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
May 25, 2011, 1:35:00 PM
May 25, 2011, 2:27:00 PM
May 26, 2011, 3:07:00 AM
ဒီလိုဇာတ်သိမ်းလေးက ပိုပြီးတော့ စွဲဆောင်မှု ပိုစေပါတယ်လေ။ လူတကိုယ် အကြိုက်တမျိုးပေါ့ နော့။
May 26, 2011, 11:48:00 AM